Golaha Congress-ka ee Mareykanka ayaa diiday soo jeedinta dooda ah casilaada M/weynaha… – Hagaag.com
Golaha Congress-ka ee Mareykanka ayaa diiday soo jeedinta dooda ah casilaada M/weynaha…
Posted on 18 Luulyo 2019 by Admin in World // 0 Comments
Golaha Aqalka Congress-ka ee Maraykanka ayaa diidey soo jeedinta ah in la bilaabo tallaabooyin lagu casili lahaa madaxweyne Donald Trump, Arrintan ayaa si qoto dheer ugu kala qeybsamay xisbiga Dimuqaraadiga.
Codkii la qaaday Arbacadii ayaa 332 xildhibaan ku horjoogsadeen soo jeedinta xildhibaanka Dimuqoraadiga Rep. Al Green, haddii ay tahay in la bilaabi karo tallaabooyinka lagu casilayo Trump, halka 95 xubnood oo golaha ka tirsan ay taageereen.
Mr. Green, oo soo jeediyay qaraarkan, ayaa rabay in uu ka faa’iideysto cambaareynta sii kordhaysa ee lagu hayo Trump ka dib weerarradii dhawaan uu ku qaaday afarta xubnood ee ka tirsan congress-ka, oo labo ka mid ah Muslimiin asalkooda Carab ah iyo Afrikaan.
Mr Green ayaa laba jeer oo hore ku guuldareysatay in uu goloaha marsiiyo qaraaro ahaa la xisaabtanka madaxweynaha, laakiin tani waxay ahayd markii ugu horeysay ee la soo hordhiga dhammaan golaha congress-ka oo dhan intii ay dimuqoraadiyiintu la wareegeen aqlabiyada Congress-ka.
235 sharci-dajiyayaal oo ka soo jeeda Xisbiga Dimuqoraadiga ayaa waxay ku biiriyeen codkoodaJamhuuriyiinta, si soo jeedintan lagu casilayo Madaxweynaha dib loogu dhigo waqti aan xadadneyn, inkastoo qaar badan oo ka mid ah xisbiga Dimuqoraadiga muujiyeen rabitaankooda in la bilaabo tallaabooyinka lagu casilayo Madaxweynaha.
Ka dib markii codbixintu ay dhammaatay, Trump ayaa kaga jawaabay bartiisa Twitter-ka ayaa sheegay in dadaalladii lagu casilayey ay dhamaatay. “Xisaabtanka madaxwaynihiina hadda wey dhammaatay, tani waxay noqon kartaa mashruuca ugu caqli xumo iyo waqti-lumis badan” ayuu Trump ku sheegay Twitter.
“Marna ma habboona in la ogolaado abid in tani oo kale ku dhacdo mar kale Madaxweynaha Mareykanka” ayuu yiri.